TSIKOMBAKOMBAN’I RAJAO SY RAVALOMANANA : Tsy ankasitrahan’ireo mpomba ny HVM maro
Miandry fatratra ny voka-pifidianana havoakan’ny Fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay tompon’ny teny farany ny amin’ny 28 novambra ho avy izao ny vahoaka malagasy. 26 novembre 2018
Raha hisy ny fifidianana filohampirenena fihodinana faharoa dia nilaza ny mpomba ny kandidà laharana faha-13 ao amin’ny bileta tokana Andry Rajoelina any amin’ny tapany avaratry ny Nosy iny fa efa vonona hiatrika izany. Fantatra fa misy ireo avy amin’ny antoko hafa nifaninana tamin’ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany teo no efa nanambara ihany koa izay kandida ho- tohanany raha hisy ny fihodinana faharoa.
Misy amin’ireo eo anivon’ny antoko Hvm no efa nanambara fa tsy hiandry ny baiko na « consigne » avy amin’ny birao politika ry zareo satria efa mahafantatra ny kandidà ho tohanany amin’ny fihodinana faharoa. « Misy lojika sy etika tokony harahina sy hotazomina rehefa manao politika. Tsy idiranay velively ny adin’ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina izay kandidan’ny Hvm tamin’ny fihodinana voalohany sy ny filohan’ny Tetezamita teo aloha Andry Rajoelina izay kandida natolotry ny Mapar.
Niara-nitolona tamin’ity farany izahay tamin’ny taona 2009 ary nanohana an’i Hery Rajaonarimampianina ny tenany sy ny antoko notarihiny tamin’ny 2013. Araka izany rariny ary lojika raha hanohana an’i Andry Rajoelina izahay raha hisy ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa » hoy ireto mpikambana ao amin’ny Hvm ireto. « Sanatria tsy zahay nitolona nanohitra ny jadona sy fanamparam-pahefana ary famarotana Tanindrazana nataon’ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc indray no hamerina azy eo amin’ny fitondrana » hoy ireto farany. « Miezaka manatsara tena ingahy Ravalo amin’ny toerana izay alehany rehetra saingy tsy hiova izany velively ity farany ary ho diso fanantenana ny mpikambana Hvm hanohana azy. Tsy mena- mivadika toa andro ririnina Ravalomanana Marc » hoy hatrany ireto farany.
Tsy baikon’i Rajao intsony
Mieritreritra ny hifanome tanana Ravalo sy Rajao raha hisy ny fifidianana fihodinana faharoa. Tsy zakan’ny vavonin’ingahy Rajaonarimampianina ny filohan’ny Tetezamita teo aloha Andry Rajoelina. Ity farany anefa no nametraka azy tamin’ny toerana maha filoham-pirenena azy. Tsy mahay mankasitraka ary amin’ny ratsy no namalian’ity filoha teo aloha ity ny tsara sy soa natao azy. Tsy mahagaga araka izany raha hiara-dia amin’ ingahy Ravalomanana i Hery Rajaonari mampianina satria mitovy fomba fisaina.
Mety hanome baiko ny hanohanana an’ingahy Ravalomanana i Hery Rajaonarimampianina saingy maro ireo tompon’ andraikitra sy mpikambana ao amin’ny antoko Hvm ary ireo mpanohana an’ity farany teo aloha no nilaza fa manana ny safidiny malalaka ary tsy baikoin’ingahy Rajao intsony. « Ampy izay ny natao. Tsy ananan’ingahy Rajaonari mampianina trosa ny tenako. Nanampy azy aho tamin’ ny alalan’ny volako manokana fa izao kosa hanohana an’i Andry Rajoelina ny tenako raha toa ka hisy ny fifidianana fihodinana faharoa », hoy parlemantera Hvm iray voafidy any amin’ny tapany avaratry ny Nosy iny.
Nambaran’ny iray hafa kosa fa « samy manana ny mampiavaka azy ny faritany tsirairay ary samy hafa ny zavatra niainana nandritra ny fotoana nitondran-dRavalomanana Marc ny firenena ka tsy tokony hoterena hifidy an’ity farany ». Mazava ny resaka…..